Kitra – «Cosafa cup 2016» : tsy nivoaka sokajy ny Barea de Madagascar | NewsMada
Par PhotoNews sur 17/06/2016
Fandresena iray, ady sahala iray ary faharesena iray. Io no vitan’ny Barea de Madagascar, nandritra ny fiadiana ny “Cosafa cup 2016”, taranja baolina kitra. Fihaonana izay tanterahina any Namibia. Vokatra izay tsy ampy hiakaran’ny ekipa Malagasy amin’ny ampahefa-dalana. Resin’i Namibia, tamin’ny isa tokana 1 noho 0, ny Barea, teo amin’ny lalao farany amin’ny fifanintsanana isam-bondrona.
Tsy nivoaka ny sokajy nisy azy, tamin’ity, ny Barea de Madagascar satria laharana fahatelo izy ireo, taorian’ny fifanintsanana ho an’ny vondrona “A”. Tsy nitsahatra nitotongana ny ekipam-pirenena malagasy, tato ho ato. Raha efa niarina sy nanomboka salama, volana vitsy lasa izay, miverina marary indray.
Betsaka ny antony mahatonga izany. Eo aloha ny tsy fisian’ny lamina matipaika fa toa fitsapatsapana hatrany no zava-misy eo anivon’ny baolina kitra. Miovaova mpanazatra sy mpilalao matetika ary tsy matoky ny teknisianina malagasy ny federasiona. Miandry ny fanazavana avy amin’ny delegasiona ny rehetra mahakasika ity vokatra ratsy azon’ny Barea ity.